कोरोना कहरमा बेखबर ११ साँसद, मृत्यु संग लड्दै अछामका कोरोना संक्रमित « Sudoor Aaja
२१ बैशाख २०७८, मंगलवार १६:५४
कोरोना कहरमा बेखबर ११ साँसद, मृत्यु संग लड्दै अछामका कोरोना संक्रमित
पूर्ण बहादुर खड्का २१ बैशाख २०७८, मंगलवार १६:५४
‘संघिय र प्रदेशमा ११ जना सासंद प्रतिनिधित्व गर्ने अछाम जिल्लामा अहिले सम्म आईसियू र भेण्टिलेटर छैन्‘
अछाम । कोरोना भाईरसले बिश्व नै आक्रान्त छ । हरेक दिन संक्रमित र मृत्युदर बढीरहेका खबर छन् । दोश्रो लहरको कोरोनाले नेपालमा पनि संक्रमण दर र मृत्युदर बढी रहेको छ । यो समाचार तयार पर्दा सम्म नेपालमा हाल सम्म ३ हजार ३ सय ६२ जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाईसकेका छन् भने संक्रमितको संख्या ३ लाख ४३ हजार ४ सय अठार छ ।
जसमा २ लाख ८६ हजार १५ जना निको भएर भर फर्किएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै नेपालमा अहिले सम्मकै उच्च संख्या ३७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७ हजार ३ सय ८८ जना संक्रमित भएका छन् । नयाँ भेरियण्टको कोरोना भाईरसको असर अछाम जिल्लमा पनि उच्च रहेको छ । समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको छ । बान्नगढी गाँउपालिकामा एक बिद्यायलका १५ जना संक्रमित हुनु । मेल्लेखमा एकदैनि २५ जना संक्रमित थपिनु यसका उदाहरण हुन् ।
पहिलो लहरमा गत बर्ष ६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने दोश्रो लहरमा २ साताको अवधिमा जिल्लामा ४ जनाले ज्यान गुमाईसकेका छन् । २ सय ६५ नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।
आईसियू र भेण्टिलेटर भए केहीको ज्यान जोगाउन सकिने चिकित्सकको भनाई छ । तर जनशक्ती अभावमा उपकरण संचालनमा आउन नसक्नुले संक्रमितले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ भने कतिपयलाई रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भेण्टिलेटर र आईसियु अभावमा अछामा बिरामीले मृत्यु कुनृ पर्ने अवस्था छ ।
जिल्ला अस्पताल अछामलाई सरकारले कोभिड बिशेष अस्पताल बनाएपनि त्यहाँ एकजना पनि स्थायी दरबन्दकिो चिकित्सक छ्रैनन् । अस्पताल करारका चिकित्सकको भरमा चल्दै आएको छ ।
अछाममा दुई अस्पतालले सकेजतिको सेवा दिईरहेका छन् । जिल्ला अस्पताल संगै बयालपाटा अस्पतालले पनि कोभिड अस्पताल नहुदाँ पनि सेवा दिईरहेको छ । न्याय हेल्थ नेपाल नामक एक गैरसरकारी संस्थाले संचालन गरेको अस्पतालले सबै सेवा निशुल्क दिईरहेको छ भने हाल कोरोनाका बिरामीलाई समेत उपचार गरिरहेको छ ।
आईसियु र भेण्टिलेटर भए रेफर गर्नुपर्ने बिरामीको पनि उपचार यहि गर्न सकिन्थ्यो होला बयालपाटा अस्पतालका मेडिकल तथा शल्य चिकित्सा निर्देशक डा. मन्दिप पाठकले भने तर उपकरण जनशक्ती नहुदाँ रेफर गर्नुको विकल्प छैन् । गैरसरकारी संस्थाको व्यावस्थापन र प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहेको अस्पतालमा नियमित बजेट नहुदाँ अस्पतालमा आर्थिक अभाव कायमै छ ।
पूर्व उपप्रधानमन्त्री भएको जिल्लामा आईसियु र भेण्टिलेटर छैन्
अछाम जिल्ला राष्ट्रिय राजनितिमा दख्खल राख्ने नेता भएको जिल्ला हो । यस क्षेत्रबाट नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्दे डा. भिम रावल केन्द्रिय उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । डा. रावल अछामको प्रतिनिधत्व गर्दे मन्त्री, गृहमन्त्री हुदैँ उपप्रधानमन्त्री सम्म बने । तर रावलले जिल्लाको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यका लगायतका क्षेत्रमा खास्सै काम नगरेको जिल्लाबासीको गुनासो छ ।
जिल्लाबाट उच्च ओहदामा डा. रावल स्थापीत भएपनि जिल्लाबासीले विकास र परिर्वतनको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । अरु विकास निर्माण, परिर्वतनका कुरा गर्दै गरौँला यतिबेला देश कोरानाले आक्रान्त छ । यो बेला उच्च ओहोदामा पुगेका नेताहरुले जिल्लाका लागि बिशेष प्राथमिक्ता दिएर कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपकरण र जनशक्तीको व्यावस्था गर्नुपर्ने बेला भएको स्थानियहरु बताउछन् ।
कोरोना कहरमा बेखबर अछामका ११ साँसद
रावल संगै अछामबाट नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्दै यज्ञ बहादुर बोगटी र नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधत्व गर्दै राम बहादुर बिष्ट पनि प्रतिनिधि सभा सांसद छन् भने एमालेको प्रतिनिधीत्व गर्दे शेरबहादुर कुवँर र तत्कालिन नेकपाको प्रतिनिधित्व गर्दै तारामान स्वाँर राष्टिय सभा सदस्य छन तर उनिहरु कोरोनाको कहरमा बेखबर जस्तै छन् ।
संघिय र प्रदेश गरी अछाम जिल्लाबाट ११ जना सासंदले प्रतिनिधित्व गर्दछन् तर कोरोनाको कहर जिल्लामा पनि दिनदिनै बढीहरेका बेला स्वास्थ्य उपचारका लागि पहल गर्नुपर्ने बेला उनिहरु बेखबर जस्तै छन् ।
आईसियू र भेण्टिलेरको अभावमा जिल्लामा मृत्युदर बढीरहेको छ । यहि क्रम चलिरहने हो भने उपचार अभावमा अछामीले मृत्यु कुर्न बाहेकको अर्को बिकल्प छैन् ।
जिल्लाको कमलबजार नगरपालिकाको पहलमा संचालित एकमात्र पिसिआर प्रयोगशाला समेत आर्थिक अभावमा बन्द हुने अवस्था छ । यसको दिगोपनाका लागि समेत कुनै पहल हुन सकेको छैन ।
अछामी जनताको भोट बाट निर्वाचित भएका साँसदहरुले जिल्लाका लागि राजनिति गर्ने हो भने यस कोरोनाको कहरमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिक्ता दिए आवश्यक उपकरण र जनश्क्तीको व्यावस्थापन गरी कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सक्रिय हुनुपर्ने बेला आएको छ ।